Wararka ka imanaya Afrika hero hero Geesiga Soomaaliyeed Dr. Xaawo Cabdi waxaa lagu xasuustaa inay ahayd codkii kuwa aan codka lahayn - Amjambo Africa
Wararka ka imanaya Afrika hero hero Geesiga Soomaaliyeed Dr. Xaawo Cabdi waxaa lagu xasuustaa inay ahayd codkii kuwa aan codka lahayn
Dr. Xaawo Cabdi, oo si kalgacal leh loogu yaqaanay Mama Xaawa, waxay ahayd khabiir ku taqasusay cudurada haweenka oo lagu amaano inay badbaadisay nolosha tobanaan kun oo qof muddo dhowr iyo toban sano ah. Xirfadeeddeedii waxay qaadatay isla 30 sano oo dagaal sokeeye uu dalkeeda ku burburiyey. Dr. Cabdi wuxuu ku dhintey Ogosto 5, 2020, isagoo ku dhintey Muqdisho, isagoo jira 73 sano, dhimashadiisuna si weyn ayaa loo xasuustaa. Markii uu cilmiga caafimaadka ku bartay Midowgii Soofiyeeti ee hore, Dr. Xaawo Cabdi, oo si kalgacal leh loogu yaqaanay Mama Xaawa, waxay ahayd khabiir ku taqasusay cudurada haweenka oo lagu amaano inay badbaadisay nolosha tobanaan kun oo qof muddo dhowr iyo toban sano ah. Xirfadeeddeedii waxay qaadatay isla 30 sano oo dagaal sokeeye uu dalkeeda ku burburiyey. Dr. Cabdi wuxuu ku dhintey Ogosto 5, 2020, isagoo ku dhintey Muqdisho, isagoo jira 73 sano, dhimashadiisuna si weyn ayaa loo xasuustaa. Markii uu cilmiga caafimaadka ku bartay Midowgii Soofiyeeti ee hore, Xaawa Cabdi wuxuu ka mid ahaa haweenkii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed ee sidaas sameeya. Waxay sidoo kale shahaadada sharciga ka qaadatay Jaamacadda Qaranka Soomaaliyeed. Waxay markii dambe aasaasay xarun caafimaad oo yar oo ku taal tuuladeeda. Markii dagaalkii sokeeye qarxay 1990kii oo ku hanjabay inuu dalka kala jeexan yahay, Dr. Xaawa waxay sii joogtay Soomaaliya waxayna si tartiib tartiib ah u bedeshay xarunteedii cusbitaal 400 sariirood ah oo lagu daweeyo carruurta, haweenka iyo ragga. Waxay caawisay qof kasta oo dhibanayaal dagaal ilaa hooyooyinka dhashay. Waxay sidoo kale dhistay iskuul loogu tala galay haweenka iyo iskuul wax lagu barto.
Waddan ay ku dhacday kala qaybsanaanta qowmiyadeed, Dr. Cabdi waxaa la sheegay inuu dejiyey heerka ay kuula dhaqmayso qof kasta si isku mid ah, iyadoo aan loo eegin jinsiyadooda. Waxaa loo magacaabay abaalmarinta Nobel Peace Prize sanadkii 2012, waxayna heshay abaalmarino badan noloshooda oo ay kujirto Doctor of Law degree oo ay ka qaadatay jaamacada Harvard. Laba ka mid ah carruurteeda ayaa hadda ah dhakhaatiir, midna wuxuu maamulaa isbitaalka ay aasaasatay Dr. xaawa Abdi
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C / llaahi Maxamed ayaa ku tilmaamay Dr. xaawa Cabdi qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook qof leh “meel dahab kaga Jira taariikhda Soomaaliya. Magasinka Glamour ayaa ku tilmaamtay Dr. Cabdi iyo gabadheeda dhakhtarka ah 2010 inay yihiin \_”quduusiinta Soomaaliya,\_” iyaga oo isbarbardhigaya Hooyo Teresa.
Mainer Deqa Dhalac oo asalkeedu yahay Soomaali, hadana haysata dhalashada Mareykanka, waxay sheegaysaa inay aad ugu qanacsan tahay howlaha ay Dr Xaawo Cabdi u qabatay Soomaaliya. Geesinimadeeda geesinimada dagaalka, iyo joogitaanka wadanka – oo nolosheeda qatar gelineysa si ay u caawiso kumanaanka qof ee nugul – waa qaali.
In badan oo naga mid ah ayaa abaal weyn ugu hayaa mahadcelinta farqiga ay u sameysay dad badan, ayuu yiri Dhalac, wuxuuna intaa ku daray in dabeecadda Dr. Habdhaqanka Cabdi ayaa ku dhiirrigeliyay inay sidoo kale ku dadaasho inay noqoto cod loogu talagalay codka bilaa codka ah.
New The New York Times waxay qortay in 2010 isbitaalkeeda ay la wareegeen dagaalyahano Islaami ah. Markii ay boobeen booska, waxay isku dayeen inay iyada ka kaxeeyaan xarunta iyaga, laakiin way diidey oo dhulkeedii ayey haysatay. Qoraal Facebook uu soo dhigay Matxafka Soomaalida ee Minnesota ayaa lagu yiri, “Dr. Xaawo Cabdi waxay halyeey u tahay malaayiin qof oo adduunka ku nool, dhaxalkeedana lama iloobi doono. ”
PreviousGanacsiyada Yaryar iyo kuwa aan macaash doonka ahayn ayaa lagu booriyay inay soo xareeyaan gargaarka COVID kahor Maalinta Shaqaalaha
NextWararka ka imanaya Afrika Mar haddii ay tahay isha is-dhexgalka gobolka, Beesha Bariga Afrika ee Bloc ayaa la halgamaya Damas